मा खनन को संभावनाहरु 2018 - Blockchain समाचार
cryptocurrency वृद्धि गर्न ध्यान संग, खानी उपकरण लागि मांग साथै बढेको छ. केही वर्ष पहिले पर्याप्त शक्तिशाली कम्प्युटर पहुँच थियो जो सबैलाई एक खान बन्न सक्छ, गत वर्ष भन्दा स्थिति एकदम परिवर्तन भएको छ र खानी को अघिल्लो विधिहरू पहिले नै अप्रभावी भएका छन्, जबकि. हामी के खानी रुझान सबैभन्दा लोकप्रिय हुनेछ भविष्यवाणी गरेका छन् 2018.
खानी लागि ग्राफिक्स कार्ड
आज एकदम महंगा उपकरण खानी लागि आवश्यक छ, खासमा, ग्राफिक्स कार्ड. पछिल्लो जुन चिनियाँ अनलाइन व्यापार मंच AliExpress यसको प्रयोगकर्ता ग्राफिक्स कार्ड को विशिष्ट मोडेल खानी फारमहरु बनाउनको लागि सबै भन्दा उपयुक्त थिए लागि थप सक्रिय हेर्न थाले रिपोर्ट. रूसी Miners सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेल छ nvidia ग्राफिक्स कार्ड-GeForce छन् GTX 1060 र GTX 1070, साथै Radeon RX480, विकसित माइक्रो उपकरणहरू द्वारा निर्मित (AMD).
यी मोडेल मात्र होइन रूसी Miners लोकप्रिय हुनुको, गत वर्ष पनि AMD गरेको साझा द्वारा बढ्दो चिन्ह लगाइएको 64%, NVIDIA निगम जमानत को मूल्य लगभग प्राप्त गर्दा 88% को शुरुवात देखि 2017. विशेषज्ञहरु वृद्धि Ethereum नेटवर्क मा Miners र अन्य लोकप्रिय cryptocurrencies एक वृद्धि नम्बरमा श्रेय छ भनेर भन्न. NVIDIA देखाउँछ कि डाटा प्रकाशित 6.7% दोस्रो क्वाटरमा लागि राजस्व 2017 बाट ग्राफिक्स कार्ड बिक्री प्राप्त भएको थियो, जो गुप्त खानी लागि प्रयोग गरियो. त्यो किन यी दुई कम्पनीहरु र ASUS कम्पनी पहिले नै cryptocurrency खानी लागि डिजाइन अद्वितीय ग्राफिक्स कार्ड जारी गर्न थालेका छन् छ. पनि, पछिल्लो गर्मी हामी AMD 7nm काम थियो भनी थाह थियो 48 कोर प्रोसेसर भनिन्छ मा जारी हुनेछ भनेर Starship 2018.
विशेषज्ञहरु, तथापि, चेतावनी खानी उपकरण निर्माता आफ्नो उत्पादन लागि माग गर्ने कम गर्न जा रहेको छ. यूसुफ मूर अनुसार, अमेरिकी बैंक पकड कम्पनी मोर्गन स्टेनले मा एक विश्लेषक, खानी मा एक आर्थिक unprofitable गतिविधि हुन सक्छन् 2018.
“हामी विश्वास छ कि मा ethereum खानी लागि कुल ग्राफिक्स बिक्री 2017 हुनेछ $800 लाख या त, र द्वारा अस्वीकार गर्नेछ 50% 2018 मा।”
मूर गरेको राय मा, यो downturn लागि पहिलो कारण देखि ethereum नेटवर्क मा समग्र ब्लक इनाम मा एक योजना गिरावट छ5Eth गर्न3Eth. दोस्रो कार्य प्रमाण बाट पारी छ (पाउ) शूलीमा प्रमाण गर्न (pos) खानी शक्ति को सट्टा जब, एक ब्लक सिर्जना र सम्बन्धित इनाम प्राप्त को सम्भावना प्रणाली मा एक प्रयोगकर्ताको स्वामित्व खम्बा गर्न समानुपातिक छ. विजय राकेश, जापानी लगानी बैंक Mizuho को एक विश्लेषक, पनि यो प्रवृत्ति उल्लेख. उहाँले पक्का छ भनेर पहिलो आधा मा 2018, ग्राफिक्स कार्ड अब cryptocurrency खानी लागि यस्तो ईथर खानी रूपमा आवश्यक हुनेछ.
“हामी ethereum अर्को छ महिना मा एक फरक भुक्तानी प्रमाणिकरण सिस्टम सार्न देखिन्छ कि विश्वास, प्रमाण-को-शूलीमा गर्न ग्राफिक्स कार्ड प्रयोग संग प्रमाण-को-कार्य बाट जहाँ ग्राफिक्स कार्ड अब आवश्यक छन्।”
Ethereum नेटवर्क को परिमार्जन सहमति प्रोटोकल को परियोजना कासपर भनिन्छ. यसलाई विशेष कम्प्युटर उपकरण नयाँ ब्लक सिर्जना गर्न अब आवश्यकता छैन कि implies; सट्टा, प्रयोगकर्ताहरूले गर्दा लागि स्थिर हुनेछ भनेर आफ्नै धन प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ, र बदलामा, तिनीहरूले लेनदेन पुष्टि भाग लिन अवसर पाउनेछन्. यसरी, Casper खानी centralization प्रतिरोध सक्ने प्रणाली सिर्जना गर्नेछ. अर्को बिभाजनमा Constantinople एक पटक, जो को सुरुमा उत्पन्न गर्न सक्छ 2018, ठाउँ लिनु, को Ethereum नेटवर्क अद्यावधिक सक्रिय हुनेछ.
को Ethereum नेटवर्क को सहमति प्रोटोकल मा संभावित परिवर्तन भए तापनि, छ nvidia को टाउको, जुआन Zhjensjun, राजस्व GPU बनाइएका पक्का छ (ग्राफिक्स प्रक्रिया एकाइ) गुप्त खानी लागि बिक्री रहने थियो, asserting cryptocurrencies र blockchain छन् “रहन यहाँ।”
“यो छ कि छैन कुनै पनि बेला चाँडै जाने संभावना एक बजार छ, र हामी शायद आशा गर्न सक्छौं कि मात्र कुरा त्यहाँ थप मुद्राहरू आउन हुनेछ छ. यसलाई विभिन्न राष्ट्रका एक सम्पूर्ण धेरै मा आउनेछ. यसलाई समय समयमा निस्कनु हुनेछ, र GPU यसको लागि साँच्चै एकदम ठूलो छ।”
ASIC (अनुप्रयोग-विशिष्ट एकीकृत सर्किट) कि चिप्स को रूप मा अवस्थित प्रभावकारी खानी लागि साथै सिर्जना गरिएको थियो. ASICs विशिष्ट उपकरणको लागि प्रयोग र कडाई सीमित कार्य पूरा गर्दै, जो यी कार्यहरु को कार्यान्वयन सस्ता र छिटो बनाउँछ. को चिप्स अधिक शक्तिशाली र धेरै कम ऊर्जा खपत गर्ने हुन्छन्; तिनीहरूले धेरै पटक ग्राफिक्स कार्ड भन्दा बढी लाभदायक छन्. यसबाहेक, खानी फारमहरु सम्मेलन र पूरा मा खर्च गर्न थप समय आवश्यक, ASIC-Miners तपाईंलाई सबै सेट गर्दा.
यसलाई कम्पनीहरु प्रकट भएको थियो यस वर्ष, यस्तो सैमसंग रूपमा, इंटेल, TSMC, र विश्व ढलाई, ASIC खानी लागि 7nm चिप्स विकास थिए. चिप्स उत्पादन को पहिलो क्वाटरमा लागि निर्धारित छ 2018. तिनीहरूले अघिल्लो 14nm चिप्स संग तुलना सुधार ऊर्जा दक्षता हुनेछ.
जापानी इन्टरनेट विशाल GMO नयाँ 7nm चिप्स मा आधारित हुनेछ भनेर ASIC-खान सुरु गर्न योजना. यो प्रविधि संग ठूलो चिप्स उत्पादन मई लागि योजना छ 2018. अर्को वर्ष GMO IČO अर्को पुस्ता खानी बोर्डहरू बेच्न सुरु हुनेछ. तिनीहरूले अर्को पुस्ता खानी बोर्डहरू किन्न एक विधि रूपमा टोकन जारी हुनेछ. यसबाहेक, कम्पनी उत्तरी युरोप मा खानी केन्द्र निर्माण गर्न योजना:
“हामी उत्तरी युरोप मा अक्षय ऊर्जा र अत्याधुनिक अर्धचालक चिप्स उपयोग एक अर्को पुस्ता खानी केन्द्र सञ्चालन हुनेछ. हामी चिप्स को खानी प्रक्रियामा प्रयोग गर्न को लागि अत्याधुनिक 7nm प्रक्रिया प्रविधि प्रयोग गर्नेछ, र संयुक्त रूप यसको अनुसन्धान र विकास र हाम्रो सम्बन्ध साझेदार अर्धचालक डिजाइन प्रविधि भइरहेको संग विनिर्माण मा काम।”
पछिल्लो सेप्टेम्बर, रूसी खान सिक्का (RMC) Bitfury चिप्स संग नयाँ खान सूर्योदय को उत्पादन समर्थन र एउटै चिप अर्को नयाँ खान Multiclet विकास गर्न सञ्चालन IČO. को IČO संकलित $43.2 लाख. RMC समावेश 15 व्यापारिक र cryptocurrency कार्यकर्ता र चार कम्पनीहरु एकतामा बाँध्ने, MultiClet सहित, SMARTHEAT, GOODWIN, र RadiusGroup. कम्पनी खान सूर्योदय उत्पादन सुरु भएको छ र, अर्को गर्मी द्वारा, एक अर्को पुस्ता प्रोसेसर Multiclet विकास गर्न चाहन्छ, जो हुनेछ 35 पटक खानी लागि थप कुशल.
यो कि शक्तिशाली र महंगा उपकरण स्पष्ट छ, जो अति ऊर्जा पनि खपत छ, सफल खानी लागि आवश्यक छ. कम्पनीहरु किन खानी को एक वैकल्पिक प्रकार विकसित गरेको छ, भनिन्छ क्लाउड खानी. शक्तिशाली डाटा सेन्टर संग कम्पनीहरु उपकरण प्रदान, र अन्तिम उपभोक्ता आफ्नो स्रोतहरू पट्टा. करार निष्कर्षमा छ र सेवाहरू भुक्तानी भएपछि, जस्तै कम्पनीहरु Hashflare, उत्पत्ति खनन र IQMining धेरै cryptocurrencies को खानी पहुँच प्रदान.
यी सेवाहरू पहिले नै आधुनिक हो. यो प्रवृतिमा सुस्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न कुनै कारण छ 2018, बादल खानी एक किफायती छ रूपमा, विश्वसनीय, र सुविधाजनक बाटो cryptocurrency प्राप्त गर्न, कुनै पनि महंगा उपकरण आवश्यकता छैन. त्यहाँ केही सम्भव कमियां छन्. क्लाउड खानी अनुबंध को विक्रेता अन्याय हुन सक्छ; सेवा को यस प्रकार को हैकिंग आक्रमण कमजोर हुन सक्छ प्रदान गर्दछ साइट; प्रयोगकर्ताहरूले खानी लागि प्राप्त आयोग शुल्क भन्दा कुनै नियन्त्रण; यसबाहेक, अनियोजित घाटा निम्न अनुबंध अन्तर्गत फिर्ता कम यसको प्रयोगकर्तालाई भुक्तानी गर्न डाटा सेन्टर बल सक्छ.
हाल, कुनै व्यवस्था त रूस र अन्य देशहरूमा मा खानी गतिविधि अभिशासित छन्. रूसी राष्ट्रपति उर्दी, तथापि, सरकार र केन्द्रीय बैंक अर्को गर्मी खानी कम्पनीहरु लागि कराधान र दर्ता क्रम स्थापित गर्न हुनेछ भनेर भन्छन्. यो पहल मानिन्छ दुवै कम्पनीहरु र निजी Miners उल्लेख हुनेछ.
डिसेम्बर मा, उद्यमीहरू को अधिकार को सुरक्षा मा रूसी संघ को अध्यक्ष अन्तर्गत आयुक्त, बोरिस Titov, को दरमा गुप्त खानी मा कर परिचय प्रस्तावित 14%.